सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् यी ४ राशिका व्यक्ति !::Leading Nepal News
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रमा यस्ता राशिहरु छन् जसलाई अरुभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ । भनिएको छ कि यस्ता ४ राशि छन् जसलाई अरु कसैले पनि जित्न सक्दैन । यसैकारणले यी ४ राशिसँग जोगिएर व्यवहार गदौ नै राम्रो हुन्छ । यी हुन् ती ४ राशि, तल पढ्नुहोस्ः
मेष राशि: सबैभन्दा शक्तिशाली ४ राशिमध्येको एक राशि मेष हो । सबैभन्दा शक्तिशाली राशिमा मेष राशि सबैभन्दा पहिलो नं मा आउँछ । मेष राशिका व्यक्तिहरुलाई उर्जापूर्ण मानिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु सधैँ क्रियासिल रहन्छन् र सधैँ सफल हुन्छन् ।
वृश्चिक राशि: ज्योतिषको अनुसार, वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरु धेरैनै ईमान्दार हुन्छन् । यस राशिका व्यक्तिहरु धेरै ने भावुक पनि हुन्छन् । यस राशिका व्यक्तिहरुले अरुको भविष्यको बारेमा सजिलै अनुमान गर्न सक्छन् ।
कुम्भ राशि: यस राशिका व्यक्तिहरु धेरै नै शक्तिशाली हुन्छन् । यिनीहरु जीवनमा धेरै नै सफल पनि हुन्छन् । यिनीहरु धेरै भावुक हुँदैनन् र इमोशनमा आएर कुनै पनि निर्णय लिँदैनन् । यिनीहरु आत्मविश्वासी र बुद्धिमानी हुन्छन् ।
मकर राशि: सबै भन्दा बलियो राशिमा मकर राशि पनि पर्दछ । मकर राशिका व्यक्तिहरु अरु राशिका व्यक्तिहरुको तुलनामा धेरै नै सजिलोसँग सोचविचार गर्ने र बुझ्ने हुन्छन् । यो बाहेक मकर राशिका मानिसहरु धेरै नै सक्रिय रहन्छन् ।यो पनि पढ्नुहोस्…
बिहान सबेरै उठेर यस्ताे काम गर्नुहाेस्, तपाईलाई पैसाकाे कमि हुने छैन !
बिहानबिहानै हत्केला हेर्नुहोस : बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस । मान्यता यो छ कि यो काम गर्नाले महालक्ष्मी, सरस्वतीको साथमा भगवान् विष्णुको कृपा समेत मिल्छ । मन्दिर सफा राख्नुहोस : घरको मन्दिरमा मुर्ति र पुजाको सामान सही ढंगले सजाएको हुनपर्छ । यसबाट देवीदेवता प्रशन्न हुन्छन् र कुन्डलीको दोष पनि शान्त हुनसक्छ । बिहानै भुमिलाई प्रणाम गर्नुहोस : बिहान पलङबाट खुट्टा भुँईमा राख्नभन्दा पहिले भुमिलाई प्रणाम गर्न पर्छ । साथमा क्षमा पनि माग्नुपर्छ किनभने धर्तीमा खुट्टा राख्नाले हामीलाई दोष लाग्छ । गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस् : सधै बिहान जब रोटी बनाउनुहुन्छ तब पहिलो रोटी गाईको लागि छुट्याउनुहोस । तपाईको घर वरपर गाई छ भने त्यो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस ।सुर्यलाई जल चढाउनुहोस् : सधैं बिहान सुर्यलाई जल चढाउन पर्छ । यस उपायबाट घरपरिवार र समाजमा मान सम्मान पाइन्छ र सुर्य सँग सम्बन्धित दोष छ भने त्यसबाट पनि मुक्ति पाइन्छ ।